Hirshabeelle oo faahfaahin ka bixisay shirkii Garowe ee gudigga maaliyadda, Aqalka sare iyo Dowlad Goboleedyadda – Radio Muqdisho
Hirshabeelle oo faahfaahin ka bixisay shirkii Garowe ee gudigga maaliyadda, Aqalka sare iyo Dowlad Goboleedyadda
Wasaaradda maaliyadda ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayaa faahfaahisay shirkii wadatashigga ee guddigga maaliyadda iyo dhaqaalaha Aqalka sare iyo Dowlad Goboleedyadda uga socday Magaalada Garowe ee Caasimada Dowlad Goboleedka Putland
Wasiirka Maaliyadda Hirshabeelle Cabdishakuur Abuukar Xasan ayaa dhowr arrimood ka hadlay waxaana kamid ah qodobbadii looga hadlay shirkii Gorowe Wasiiradda Maaliyadda Dowlad Goboleedyada iyo Aqalka Sare.
Waxyaabaha shirka looga hadlay waxaa kamid arrimaha dhaqaalaha ee maamul Goboleedyadda iyadoo dhanacyadu dood ka yeesheen qodobbada qaarkood.
Xafiiska Hanti dhowrka qaranka ayaa sidoo kale shirkaas qeyb ka ah looga hadlayo arrimaha Maaliyadda ee maamul Goboleedyada dalka.
“Waxaa laga wadatashaday dhinacyo badan kuwaas oo faa’iido u ah guud ahaan dalka waxaana Garowe isugu tagay Wasiiradaha Maaliyadda Dowlad Goboleedyada, Madaxda Aqalka sare iyo Xafiiska Hanti dhowrka qaran”, ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Hirshabeelle.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in muhiimadu tahay sidii loogu heshiin lahaa qodobo loo dhan yahay oo ay ku wadashaqeeyaan Dowladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyadda.
Heshiis xabad joojin ah, oo ka dhaqangalay Marinka Gaza